शिक्षा Archives - Samaj Patra
रोजगारीको लागि कोरिया जान चाहनुहुन्छ ? यस्ता छन् तपाईँले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू
काठमाडौँ- प छिल्लो समय नेपालीहरूका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा रहेको देश हो दक्षिण कोरिया। त्यहाँ पाउने उच्च मूल्यको पारिश्रमिक र सीपका लागि नेपालीहरू कोरिया जान लालायित हुन्छन्। सरकारी तवरबाटै भाषा …
कतारमा अब विदेशी कामदारले पनि कतारी नागरिक जस्तै सुविधा पाउने ! काठमाडौं । कतार सरकारले विदेशी श्रमिकको लागि स्वास्थ्य विमा अनिवार्य गरेको छ । स्वास्थ्य विमा अनिवार्य अनिवार्य भएपछि विदेशी …
हङकङले लगायो नेपाल एयरलाइन्सलाई फेरि प्रतिबन्ध
हङकङले लगायो नेपाल एयरलाइन्सलाई फेरि प्रतिबन्ध हङकङले नेपाल एयरलाइन्स (एनएसी) सहित आठ देशमाथि फेरि हवाई प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ । पछिल्लो प्रतिबन्ध मार्च चार तारिख (फागुन २० गते) सम्म लागू …
वैशाख ९ गतेदेखि यसरी हुन्छ एसईई परिक्षा, तालिका पनि सार्वजनिक
काठमाडौ । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) आगामी वैशाख ९ गते बिहान ८ बजे सुरु हुने भएको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीबार परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ। …
शिक्षक सेवा आयोगले थप्यो निमाविको फारम भर्ने म्याद
काठमाडौँ शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको अनलाइन दरखास्त फाराम भर्ने सिंगल दस्तुरको अन्तिम म्याद दुईदिन थप गरेको छ । पूर्वनिर्धारित सूचनाअनुसामाघ ६ गते सम्म र …
एकाबिहानै अध्यक्ष बन्न विद्यार्थी नेता प्रचण्ड निवासमा
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)का विद्यार्थी नेताहरुले छलफल गरेका छन् । आइतबार बिहान प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेर विद्यार्थी नेताहरुले छलफल गरेका हुन् । अखिलको …
जापानमा डेटिङ जाँदै करौडौ पर्ने महङ्गा घडी चो’र्दै गर्ने युवति प’क्राउ,,
टोकियो, जापान। टोकियो प्रहरीले एक १९ बर्षिया म’हिलालाई म’हङ्गो घडी चो’रेको आ’रो’पमा प’क्रा’उ गरेको छ। ति १९ बर्षिय महिलाले करिब १ करोड ३० लाख जापानी येन पर्ने घडी चो’की हुन। …
काठमाडौं । अहिले टिकटक सबैको लोकप्रिय बनेको छ । आफुमा भएको प्रतिभा देखि लिएर हास्यास्पद भिडियो हालेर धेरै भियुज तान्नेको होडबाजी नै चलेको छ । यस्तै एउटा भिडियो अहिले सामाजिक …
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीयतहलाई जिम्मा दिएपछि राजविराजका विद्यालय आइतबारदेखि खुल्ने भएको छ । सप्तरीको राजविराजमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयननारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिको …
१२ हजार स्थायी शिक्षकको विज्ञापन चाँडै, नवनियुक्त अध्यक्ष भन्छन्, आयोगको गरिमा बढाउनेछु
काठमाडौं– शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिसँगै १२ हजारभन्दा बढी स्थायी शिक्षकको विज्ञापन गर्न बाटो खुलेको छ। विधिसम्मत प्रतिस्पर्धाबाट सिफारिस भएका व्यक्तिलाई नियुक्त नगर्दा आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन थियो। सरकारले मंगलबार …